အချစ်မီးတောက် နှင့် အချစ်၏ အန္တရာယ်များအဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
အချစ်မီးတောက် နှင့် အချစ်၏ အန္တရာယ်များ
အောကျတိုဘာ ၁၀, ၂၀၁၇ - ၆:၂၆ ညနေ News Code : 859526 Source : ABNA Link:
အချစ်မီးတောက် နှင့် အချစ်၏ အန္တရာယ်များ ဆို သည့် ကိစ္စရပ်ကို ဟဇရတ် အာယာ သွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ်မိုရှိရာဇီး ရေးသား သီးကုံး ထား သည့် ( မွရ်ှကေလာသ်သေ ဂျင်စီ ဝါ ဂျဝါနန် )) စာအုပ်မှ အဗ်နာ ချစ်ပရိတ်သတ် များ အတွက် ကောက်နုတ် တင်ပြအပ်ပါတယ်။
အချစ်၏ ကြီးကျယ်မှုအဆင့်အတန်း (သို့မဟုတ်) အချစ်၏အရူးထမှု ရောဂါနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး အမြောက်အများရေးသား သီကုံးပြောဆိုခဲ့ကြလေ သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဤစကားလုံး (အချစ်) လောက်အသွင်အမျိုးမျိုး၊ ဆန့်ကျင်ဖက်မတူညီသည့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များအဖြင့် အမြောက်အများ မရှိသလောက်ပင်ဖြစ်ပေသည်။
အချို့ စာရေးဆရာကြီးများ အနေဖြင့် တစ်ခါတစ်လေ “အချစ်” အကြောင်း ကို အလွန်တရာမြှင့် တင်ပြီး ရေးသား ကြလေသည်။ ရေးသား သည်မှာ …..
“အချစ်ဆိုတာ ဘ၀၏သရဖူ၊ အမြဲတစေကံကောင်းမှု၏အမည်” ဖြစ်လေ၏။ (ကိုသာမ်၊ ဂျာမဏီစာရေးဆရာကြီး)
“သို့ပါစ်”အနေဖြင့် အချစ်တန်ခိုးအာနိသင်ကို ရေးသားထားလေသည်။ ၄င်း၏ယုံကြည်ချက်သည်ကား အချစ်ဆိုတာ ၀ိဥာဉ်အတွက်ခွန်အား၊ မနုဿ လူသား၏နှလုံးသားကိုရှင်သန်စေသည့်အရာဖြစ်ပါသည်ဟုဆိုထားလေသည်။
အချို့အရှေ့တိုင်း ဖလော်ဆော်ဖာကြီးများ၏ အုပ်စုမှ ဤထက်ပင် ခြေလှမ်းထားပေသည်။
“လောကကြီး၏ လှုပ်ရှားမှုတိုင်း၊ အသွင်ဆောင်မှုတိုင်း၏နောက် ကွယ်၌ အချစ်တစ်မျိုး (သို့မဟုတ်) တစ်မျိုးမကကြိုးကိုင်ထားလေ၏။ ယုတ်စွ အဆုံးဂြိုဟ်များ၏ လှည့်ပတ်နေမှုသည်လည်း ဤကဲ့သို့သော (အချစ်တစ်မျိုး) ကြောင့်ဖြစ်လေသည်။!”
သို့သော် အကယ်၍ ဤစကားလုံး၏အဓိပ္ပါယ်နှင့် ၄င်း၏ကျယ်ပြန့် မူကို ဆိုလိုသည်မှာ ဆွဲဆောင်မှုတိုင်းနှင့် အတိုင်းထက်အလွန် စိတ်ဝင်စား ဆွဲဆောင်မှုဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမည်ဆိုလျှင် မလွဲမသွေ(အထက်)က ၄င်းတို့ ၏ဆိုစကားကို ထောက်ခံရပေမည်။
ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်လှပသည့်အကျယ်ဖွင့်ဆိုချက်များအားလုံးဆန့်ကျင်ပြီးအချို့စာရေးဆရာများနှင့်ဖလော်ဆော်ဖာများကအလွန်တရာပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ရေးသားထားလေသည်။ အချစ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး စွပ်စွဲ မှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့လေသည်။ အချစ်ကိုရောဂါဝေဒနာတစ်ခုနှင့် ရွံ့စရာ မုန်းစရာ ကောင်းသည် အဖိုးမဲ့အရာတစ်ခုဟု ဆိုထားကြလေသည်။
“ အချစ်ဆိုသည်မှာ ….. ပမာအားဖြင့် စလ်(ခ)ကင်ဆာရောဂါ တစ်မျိုး ဖြစ်၍၊ကင်ဆာနှင့် နာတာရှည်ရောဂါကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး အသိဥာဏ် ဦးနှောက်ရှိသူ လူသားအနေဖြင့် မလွဲမသွေထွက်ပြေးလေ၏။” ….
“ အချစ်ဆိုတာ ရှာမ်ဗာနီအရက်ကဲ့သို့ပင်တည်း။ ”
အခြားအချို့ပညာရှင်များမှာ ပမာအားဖြင့် (နက္ခတာရာအကျော် အမော်ပညာရှင်) (ကိုပရ်နီက်) အချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မိမိကိုသိက္ခာချပြီး အမ်သေဂျယ် အပြည့်နှင့် ပြောလေသည်မှာ …..
“အချစ်ဆိုတာ အရူးအမျိုးအစားများထဲမှ အရူးတစ်မျိုးမဟုတ်ရင် တောင် အနည်းဆုံး ဦးနှောက်အားပျော့ပြီး မတတ်နိုင်သူရဲ့ အနှစ်ချုပ် ရလာဒ် တစ်ခုဆိုတာ သေချာပါတယ် …..”
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အချို့လည်းပဲ၊ဥပမာအားဖြင့်“ကာရ်လာယေလ်” အနေဖြင့်လည်း အချစ်အပေါ်တိုက်ခိုက်ပြီးပြောလေသည်မှာ …..
“အချစ်ဆိုတာ … အရူးအမျိုးအစားတစ်ခုတည်း၏ အမည်မဟုတ်ဘဲ မြောက်များစွာသော အရူးအမျိုးအစား များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်အရာဖြစ် ချေသည်…..”
ဤကဲ့သို့ အလွန်တရာအပြင်းအထန် ဆန့်ကျင်ဖက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆို ချက်များကိုအဖြစ်အပျက်တစ်ခုခုအတွက်ဟုအဆိုမပြုသင့်ချေ။ အမှန်တကယ် ဤကွဲလွဲမှုများ၊ ဆန့်ကျင်ဖက်များ၊ တွေးခေါ်ဝေဖန်မှုများသည် ပြုလုပ်သူများ ၏ အမြင်ကွဲလွဲမှုသာ ဖြစ်ပေသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ စာရေးဆရာနှင့် ပညာရှင်တိုင်းသည် အမှန်တကယ် အချစ်၏ မြောက်များစွာသောမျက်နှာများမှ ယေဘုယျအားဖြင့်မိမိတို့ဘ၀တွေ့ ကြုံခံစားရသည့်မျက်နှာတစ်ခုတည်းကိုသာလျှင်ဆွေးနွေးတင်ပြကြလေသည်။
ဤအတွက်ကြောင့် မလွဲမသွေထောက်ခံရမည်မှာ …..
အကယ်၍ အချစ်၏ဆိုလိုသည့်အဓိပ္ပါယ်မှာ မနုဿလူသားနှစ်ဦး၏ (သို့မဟုတ်) ခြုံငုံပြီးပြောရလျှင် တည်ရှိနေသည့်အရာ (မနုဿ၊ တရိစ္ဆာန်၊ အသီး၊ အခေါက်၊ အရွက်များ၊ အပင်များနှင့် သက်မဲ့အရာများ) အကြား အတိုင်းထက်အလွန် ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခု၊ စိတ်ဝင်စား၊ စွဲမက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကြီးကျယ်မြင့်မားသည့်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်ဆိုလျှင်ဤထက်ကောင်းသည့်အရာရှိပါဦးမည်လော? ! ဖြစ်ပေသည်။
ထို(အထက်ဖော်ပြပါအချစ်)၏ စွမ်းအား၊ခွန်အားသည်၎င်း ၏ လမ်း တွင်လာသမျှအဟန့်အတား၊အတားအဆီး၊အနှောက်အယှက်များကို မိမိလက် အတွင်း သိမ်းပိုက်နိုင်သည်အထိ အံ့သြစရာ ခွန်အားရှိပေသည်။ ပြီးနောက် မိမိ၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏ ခရီးစဉ်ရှိ အခက်အခဲများအားလုံး ကျော်လွှား နိုင်ပေသည်။
အချစ်နှင့်ပတ်သက်၍ ချီးမွမ်းထောပနာမှုများအားလုံးသည် ၄င်း၏ ခွန်အား၊စွမ်းအားနှင့်အတုမဲ့အင်အားကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။ ဤအတွက်ကြောင့် ပင် ကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားသည့်အတိုင်း မြောက်များစွာသော စာပေလင်္ကာများ၊ ဗိသုကာများ၊အနုပညာလက်ရာများသည် ဤ စွဲဆောင်မှု၊ စိတ် ၀င်စား မှုဆို သည့် အချစ်ခွန်အား၏ ရလာဒ်ကြောင့်ပင်တည်း။
သို့သော် အချစ်ဆိုသည့်ဆိုလိုချက်မှာ အပြစ်ငရဲသား မနုဿလူသား နှစ်ဦးအကြား၊ ညစ်ညမ်းမှု၊ မကောင်းသည့် စာရိတ္တ ပျက်ပြားမှုများဖက်သို့ ခေါ်ဆောင်စေသည့် စွဲဆောင်မှုနှင့် စိတ်ဝင်စားမှုကို ဆိုလိုပါက အချစ်နှင့်ပတ် သက်ပြီး ပြစ်တင်ဝေဖန် ရှုံ့ချထားမှုသည် နည်းပင်နည်းနေသေးပေ၏။ အကြောင်းမှာ ….. ဤမကောင်းသည့် (ရှက်စရာ) အမာရွတ်အစွန်း အထင်းသည် ချွန်ရန်၊ ပျောက်ရန် မလွယ်တော့သည့် ထင်ရှားသည့် အမာရွတ်ကြီး အစွန်းအထင်းကြီး ဖြစ်လေသည်။
အကယ်၍ ဤဆွဲဆောင်မှု၊ စိတ်ဝင်စားမှုဆိုသည်မှာ ယေဘုယျ အားဖြင့် အသိဥာဏ် တရားကိုပျက်စီးစေပြီး အလုပ်မလုပ်တော့သည့် အသိဥာဏ်နှင့် မနုဿလူသားအား မိုက်ရူးသည့် လုပ်ရပ်မှန်သမျှကို လုပ် စေသည့် ရူးသွပ်မှုကို ဖြစ်စေသည့် အရာဆိုလျှင် မည်မျှပင် ချိုးနှိမ်သိက္ခာချ သည် ဖြစ်ပါစေ နည်းသေးပေသည်။
“အချစ်နှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ္စတွင် ကောင်းမှုနှင့်မကောင်းမှုတို့၏ ကွာခြားမှု အကွာအဝေးမှာ တစ်ချက် “နမ်း” သလောက်သာလျှင်ကွာဝေးနေ ပေသည်။
အနှစ်ချုပ်၊ အတိုချုပ် ဆိုရမည်ဆိုလျှင် ….
အမြင်စုံ၊ ထောင့်စုံကို ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီး အချစ်၏မျက်နှာအမျိုးမျိုးရှိ ကြောင်း ဤအချက်ကို အခြေခံပြီး ၄င်းအတွက် ချီးမွမ်းထောပနာ ခြင်းနှင့် ပြစ်တင်ဝေဖန်ရှုံ့ချခြင်း နှစ်မျိုးစလုံးဖြစ်နိုင်ကြောင်းကို တွေ့ရှိရပေသည်။
ဤနေရာ၌ သန့်စင်သန့်ပြန့်ဖြူစင်သည့် လူငယ်လူရွယ်တို့ အတွက် ဂရုပြုရန်အရေးကြီးသည့် ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့မျက်မှောက် ခေတ်တွင် စာအိတ်လှလှလေးထဲမှ အချစ်ကဗျာဆန်ဆန် (ရည်စားဘ၀)တွင် စာရိတ္တ ပျက်ပြားစေသည့် ဒုစရိုက်များ၊ ပျက်စီးမှုများ မဖြစ်ဘဲနေစေသည့် အကွက်ကျန်ပါသေးသနည်း။
အညစ်အကြေးအလုပ်များ မသန့်မရှင်း၊တရား မ၀င်သည့် အလုပ်များ ကို သန့်ပြန့်သည့် အချစ်စစ်အချစ်မှန်ဟု အမည်ပေးပြီး အလွဲသုံးစားပြုနေကြလေ သည်။ အပြစ်များနှင့် ကျင်လည်ကျက်စား နေသူများ၊ (တရားမ၀င်သည့်) ကာမရာဂ နောက်လိုက်သူများသည် မိမိတို့ ကိုယ်ကိုစစ်မှန် သည့်အချစ်စစ် အချစ်မှန်ထားသူများ၊ ခေတ် စကားအရ ဆိုလျှင် “အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာဖြစ်သွားသည့် နှလုံးသားကို သက်သေအဖြစ်၊ ဤအစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ နှလုံးသား” မှအပ စနဒ် လက်မှတ် အထောက် အထားအဖြစ် လက်တွေ့ မရှိဟု ဆိုသူများအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ကြလေသည်။
ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲသူမှန်သမျှနှင့် မိမိ၏ တိရစ္ဆာန်ဆန်ဆန်ဖြစ်သည့် ကာမရာဂစိတ်ကိုဖြည့်စီးရန်သာ မကောင်းသည့် နီယသ်ရှိသူများသာ အချစ် အား ကဗျာဆန်ဆန်စကားလုံးများအဖြစ် တင်ပြမှုများကို အသုံးချပြီး မိမိတို့ ၏ရှိုင်တွာန်ဆန်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ကြ လေသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဤအတွက်ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောမသန့်ရှင်းသည့် နီယသ်များ၊ ရည်ရွယ်ချက်များ ထားရှိသူတို့သည် မိမိတို့၏ မသန့်ရှင်းသည့် နီယသ်များ၊ ရည်ရွယ်ချက်များကို အောင်နိုင်ပြီးနောက် ၄င်းတို့၏ ရုပ်အစစ် အမှန်ကိုပြလေသည်။ပြုထားသမျှ ကတိက၀တ်များကိုမေ့လိုက်ကြလေသည်။
ပမာအားဖြင့် တင်ပြရမည် ဆိုလျှင် ရေအပြည့်ဖြည့် ထားသည့် ရေခွက်အား တစ်ချိန်တည်းမှာ မှောက်လှန်လိုက်ရာ ရေတစက်ပင် မကျန်တော့သည့် အဖြစ် မျိုး အဖြစ် ၄င်းတို့၏ သန့်ပြန့်သန့်ရှင်း ပါသည် ဆိုသော မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ များ၊ အချစ်မီးတောက်များ၊ အချစ်မီးလျှံများ မကျန် တော့ချေ။
ဤသို့ဖြင့် ၄င်းတို့နှလုံးသား၌ အချစ်၊ မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ အချစ် အတွက်ဆိုပြီး ပေးထားခဲ့သည့် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကတိက၀တ်များ မရှိတော့ချေ။
ဤအချိန်၌ (ကျိုးပဲ့၊ အက်ကွဲနေသည့် နှလုံးသားပိုင်ရှင်) ချစ်သူမှ ကောက်ကျစ် လှည့်ဖျားမှုကို ခံလိုက်ရပြီး နောင်တရကာ ၀မ်းနည်းကြေကွဲ ပူဆွေးမှုဆိုသည့် လောကသို့ရောက်ရလေသည်။
လူငယ်လူရွယ်များအနေဖြင့် မလွဲမသွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန်၊ အသေး စိတ်၊ ဂရု နှင့် သတိပြု နိုင်သမျှပြုပြီး၊ သတိရှိနိုင်သမျှရှိပြီး ဤအချစ်တုသမား များ အချစ် အားသတိရှိရပေမည်။ (မြန်မာဆန်ဆန်ပြောရလျှင် ရည်းစား မထားသင့်ချေ။ ထားလျှင် ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းသည် မကောင်းမှုဖက်၊ တရားမ၀င်မှု ဖက်သာ ဦးတည်နေပေသည်။)
ဤလူလိမ်လူကောက် အချစ်သမားများထံဝယ် မုသား၊ လိမ်လည်မှု၊ ကောက်ကျစ်လှည့်ဖျားမှု၊ (ယုတ်ညံ့မှု) မှအပ အခြားအရင်းအနှီးမရှိချေ။
အပြင်ပိုင်းအရ အချစ်နှင့်ပြည့်နေသည့် ၄င်းတို့၏ နှလုံးသားသည် တစ်ချိန်တည်းတွင် နေရာအများအပြားတါင် နေရာပေးလေသည်။ ပြီးနောက် ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲမှု၊ လှည့်ဖျားမှုဖြင့် မိမိကိုယ် အချစ်စစ် အချစ်မှန် ရှိသူ အဖြစ် သက်သေထူကြလေ၏။
ယခုခေတ်ကာလ၌ ဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များ အမြောက်အများကို တွေ့နိုင်ပေသည်။ ဤကဲ့သို့သော လူပုဂ္ဂိုလ်များသည် မုသားများ၊ လိမ်ညာမှု များ၊ ကောက်ကျစ်မှုများ၊ လှည့်ဖျားမှုများနှင့် ပြည့်နေသည့် ရည်စားစာ တစ်စောင်တည်းကို ကောင်မလေး (၄၊ ၅ ယောက်) ပေးသည်အထိ အရှက် သိက္ခာမဲ့လာကြလေသည်။
နေရာတိုင်း “အချစ်စစ်အချစ်မှန် သန့်ပြန့်ဖြူစင်သည့် အချစ်မေတ္တာ ကို” ပြပြပြိး လှည့်ဖျားလေသည်။ ဤအချစ်စစ်အချစ်မှန်အမည်ဖြင့် ဂိုနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်ကို ကျူးကျော်ကြလေသည်။
ဤကိစ္စအတွက် ကောင်မလေး(လူငယ်လူရွယ်များ)သာ သတိနှင့် နေရာမည်မဟုတ်ဘဲ၊ ကောင်လေး(လူငယ်လူရွယ်များ) လည်း သတိနှင့်ပြု ရပေမည်။
ယခုခေတ်ကာလ၌ အချစ်မေတ္တာဆိုသည့် အမည်ဖြင့်ထောင်ချောက် ကျော့ကွင်းပေါင်းအမျိုးစုံကိုခင်းထားလေသည်။ ထိုကျော့ကွင်း ထောင်ချောက် ၌ မိခဲ့လျှင် ယေဘုယျအားဖြင့် လွတ်မြောက်ဖို့ မလွယ်တော့ချေ။
ဤအတွက်ကြောင့် တခဏတာမေ့လျော့မှု၊ ပေါ့ဆမှု၊ အကြောင်းမဲ့ အကောင်းမြင်မှုနှင့် ပြစားလှည့်စားမှုသာ ဖြစ်သည့် စကားလုံး လှလှလေးတွေ ကို လက်ခံလိုက်မှုကြောင့် တစ်ဘ၀လုံး အစားထိုး ဆပ်လို့မရသည့် အဖြစ်မျိုး တခါတလေ ဖြစ်ရလေ၏။
အထူးသဖြင့် အချစ်မေတ္တာငတ်နေသူများ၊ ဘ၀အားအပယ်ခံရမှုများ နှင့် တည်ဆောက်ရသူများသည် အချစ်မေတ္တာ၏ အမည်ဖြင့် တောင်းဆိုလာ မှုကို အလျှင်အမြန်လက်ခံ အဖြေပေးကြလေသည်။
ဤအပယ်ခံရမှုများကြောင့်လှည့်ဖျား၊ ကောက်ကျစ်မှုကို ခံရလေ သည်။ ဤကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များ( အချစ်မေတ္တာငတ်နေသူများ၊ အပယ်ခံ ရမှုများခံရသူများ) အနေဖြင့် သူတစ်ပါးထက်ပိုပြီး သတိ၊ အသိရှိဖို့ လိုအပ် ပေသည်။
လာမည့်ဆွေးနွေးမှုမှာ“အချစ်၏အန္တရာယ်များ”ခေါင်းစဉ်ဖြင့်အရေး ကြီးအရေးပါသည့် အချက်အလက်များကို တင်ပြမပါမည်။ ဤကဏ္ဍ၏အဆုံး သတ်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်အနေဖြင့် “အချစ်ဆိုတာ” အလွန်တရာဆွဲဆောင်မှု၊ စိတ်ဝင်စားမှု တစ်ခု၏ ခွန်အား၊ စွမ်းအားဖြစ်ကြောင်း တင်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်။ မနုဿလူသားနှစ်ဦး (သို့မဟုတ်) အရာနှစ်ခုအကြား ယေဘုယျအားဖြင့် သန့်စင်သန့်ရှင်းသည့် ရည်ရွယ်ချက်သို့ အရောက်ပို့ဆောင်ပေးသည့် အကြောင်းခံဖြစ်ပေသည်။
အချစ်(စစ်မှန်)သည် မနုဿလူသား၏ ၀ိဥဉ်အား အမြင့်တကာ့ အမြင့်ဆုံးလင်းလက်တောက်ပမှုနှင့်ဖန်ဆင်းခံများ၏အမြင့်မြတ်ဆုံး၊ကျက်သ ရေအရှိဆုံး လက်ရာတစ်ခုပင်တည်း။
မုချဧကန် မင်္ဂလာဆောင်နှင်းခြင်း၊ အိမ်ထောင်ပြုခြင်း၏ အခြေခံ သည် သန့်စင်သန့်ပြန့်သည့် အချစ်မေတ္တာအပေါ် ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးမှ အခြေပြု ထားမည်ဆိုလျှင် အမြဲတစေ၊ ထာဝရခိုင်ခံ့မြဲမြံပြီး၊ မြင်ရာတိုင်းအပြစ်အနာ အဆာကင်းခြင်း၊ ရလာဒ်ကောင်းများပြည့်နေသည့် ရလာဒ်များ ရခြင်းနှင့် စိတ်ချစရာ၊ စိတ်ချမ်းသာစရာများကိုသာ ခံစားရပေလိမ့်မည်။
သို့သော် ဤ(အထက်ဖော်ပြပါ) အားလုံးစည် လိမ်လည်၊ မုသားဖြစ် တည်ဆောက်ထားသည့် အချစ်တု၊ လှည့်ဖျားကောက်ကျစ်မှုများနှင့် ဖွဲ့နှောင် ထားသည့် အချစ်တုနှင့် လုံးဝဥဿုံ ကွာခြားလေသည်။ အကြောင်းမှာ ဤသူများသည် အလွန်တရာအချစ်မီး အပြင်ပိုင်းအရ ထောက်ပြခြင်းနှင့် ထောက်ပြသူများ ဖြစ်ကြလေသည်။
မနုဿလူသားအားအခြားအရာများအားလုံးကိုမေ့ပစ်စေပြီးစစ်မှန် သည့် အချစ်စစ်၊ အချစ်မှန်ကိုပြရမည့်အစား အခြားအရာများတွင် နှစ်မျော ပိတ်မိစေသည့် အတင်းအဓမ္မကာမ၊ ရာဂနှင့် တရားမ၀င် ကာမ၊ရာဂနှင့် (အထက်ဖော်ပြပါ အချစ်စစ်၊ အချစ်မှန်သည်) ဆန့်ကျင်နေလေသည်။
အမှန်တကယ် ထိုစစ်မှန်သည့်အချစ်၊ အချစ်စစ်အချစ်မှန်များ မေတ္တာများသည်ပင် ကြီးမားသည့် အန္တရာယ်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရလေသည်။ ထိုအန္တရာယ်များကို လုံးဝဂရုသတိမပြဘဲ မနေသင့်ချေ။
သာမန်အားဖြင့်အချစ်မေတ္တာများသညပင်အလွန်တရာချစ်မြတ်နိုး ခြင်း၊ စွဲလန်းခြင်းအပြစ်အနာအဆာများကို ဖုံးဖိ၊ ဖုံးကွယ်ပေးခြင်း အလုပ်ကို လုပ်လေသည်။
တနည်းအားဖြင့် သာဓကအားဖြင့် တင်ပြရမည်ဆိုလျှင် မနုဿ လူသားတိုင်းသည် မိမိတို့၏ မျက်လုံးနှလုံးတွင် တစ်လုံးသည် “ရေဇာ” ခေါ် နှစ်မြို့မှုနှင့် နောက်တစ်လုံးမှာ “နဖရသ်” ခေါ် မုန်းတီးရွံ့ရှာမှုကို ပိုင်ဆိုင်ကြ လေသည်။ အချစ်မေတ္တာထားပြီးနောက် ယေဘုယျအများအားဖြင့် မနုဿ လူသားသည် “နဖရသ်” ခေါ် မုန်းတီးရွံ့ရှာမှု မျက်လုံးအား လုံးဝပိတ်ထား လိုက်လေသည်။
ယုတ်စွအဆုံးချစ်သူ၏မကောင်းတကာ့မကောင်းဆုံး(ချွတ်ယွင်းချက်၊ အပြစ်အနာအဆာ) ကိုပင် အံ့သြစရာကောင်းသည့်ဖြေရှင်းချက်များ၊ အကျယ် ဖွင့်ချက်များဖြင့် အကောင်းတကာ့အကောင်း “အလှဆုံး” အဖြစ်တင်စားကြ လေသည်။
မည်မျှဆိုလျှင် အကယ်၍ တစ်ဦးတစ်ယောက်အနေဖြင့် ဤ(အတိုင်း မဲ့၊ အကွပ်မဲ့အချစ်ချစ်သူများ) အနည်းငယ်ပင် ဆိုဆုံးမသတိပေးမိလျှင်လည်း အပြင်းအထန် ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်မှုနှင့် ၄င်း၏နှလုံးသား၌ အငြိုးအတေးထားမှု ကိုလုပ်လေသည်။
ပြီးနောက် ဆိုဆုံးမသူအား မိမိနှင့်ရန်ငြိုးထားသူ၊ မနာလိုဝန်တို စိတ်ထားသူ၊ အမြင်ကျဉ်းသူအဖြစ်မြင်လေ၏။ ဤအတွက်ကြောင့် ဆိုဆုံးမသူ နှင့် ရန်ဖြစ်ရန်လုပ်၊ ပြဿနာလုပ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်သွားလေသည်။
ဤကဲ့သို့မျက်ကန်းအချစ်သမားများသည် အလွန်တရာ လမ်းမှောင် မိုက်သို့ရောက်သွားလေသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဤကဲ့သို့သောသူများသည် အချစ်ကြောင့် တလောကလုံးရှိသူများက မပိုင်ဆိုင်ရသည့်အရာကို ပိုင်ဆိုင် လိုက်ရသည်ဟု မိမိကိုယ်ကို ထင်ကြမြင်ကြလေသည်။
အကယ်၍ တစ်ဦးတစ်ယောက်က ဆိုဆုံးမလျှင်လည်း ထိုဆိုဆုံးမသူ သည် သတင်းမဲ့မှု၊ မှန်မှန်ကန်ကန် မသုံးသပ်နိုင်မှုကြောင့်၊ မှားယွင်းစွာ စီစစ်မှု ၏ရလာဒ်ကြောင့်ဟု သတ်မှတ်နားလည်လေ၏။
ဖွာရစီဘာသာစကား၌ ဆိုရိုးစကားရှိလေသည်။“မဂ်ျနူ(န)၏မျက်လုံး ဖြစ်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် လိုင်းလာ ၌ မည်သည့်မကောင်းမှု၊ အပြစ်အနာအဆာ မျှမရှိချေ။”
မြန်မာစကားအရဆိုလျှင် “ပပ ၀တီမျက်လုံးဖြင့်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် မင်းကုသ၌မည်သည့်မကောင်းမှု၊ အပြစ်အနာအဆာမျှမရှိချေ။” ဖြစ်ပေသည်။
ဤကဲ့သို့သော(မျက်ကန်း)အချစ်သမားများကိုဆိုဆုံးမမှုသည်မည်သည့်အကျိုးမဖြစ်ထွန်းသည့်အပြင် တခါတရံ ကြီးမားသည့် အန္တရာယ်ဥပဒ် တစ်ခုပင်ဖြစ်စေပါသည်။
သို့သော်လည်းပဲ ….. ဤကဲ့သို့သောအချစ်များသည် သာမန်အား ဖြင့်ကာမဆက်ယှက်မှုပြုပြီးနောက် ငြိမ်းသွားကြလေသည်။ ရုတ်တရက် ဖုံးကွယ်ထားမှုများ အားလုံးပေါ်လာပေတော့သည်။ အမှန်တရားကိုမြင်လာ လေသည်။ အတိုင်းမဲ့အချစ်သမားသည် တစ်နည်းအားဖြင့် နက်ရှိုင်းသည့် အရသာခံစားမှုနှင့် ကြာရှည်အိပ်ပျော်နေမှုမှ နိုးထလေတော့သည်။ ထိုအချိန် ၄င်းသည် အထင်အမြင်စိတ်ကူးယဉ် ကမ္ဘာမှ ထွက်ပြီးစစ်မှန်သည့်လောကသို့ ခြေလှမ်းချလိုက်သည်ဟု ခံစားရလေသည်။
ဤအမြင်၌ အချစ်မေတ္တာ၏ အရေးကြီးမှု၊ တန်ဖိုးရှိမှု မှန်သမျှ ကုန်ဆုံးသွားလေသည်။အရာရာတိုင်းကိုအမြင်သစ်တစ်ခုအဖြစ်မြင်လာလေသည်။ အထက်ကမကောင်းမြင်ထားသည့် အရာမှန်သမျှ၊ ချွတ်ယွင်းမှု မှန်သမျှကို အကောင်းမြင်လာလေ၏။
ထိုအချိန်အခါ၌ အရှက်တရား၊ နောင်တ တရားကို တင်ပြမရနိုင် တော့သည့် တင်ပြမှုကို ရပ်ဆိုင်းရလေသည်။ မဲမှောင်၊ မဲမိုက်နေသည့်ညပမာ အခက်အခဲပူဆွေးမှုများ၊ အကြပ်အတည်းများအနေဖြင့် ၄င်း၏၀ိညာဉ်ကို မနေ နိုင်မထိုင်နိုင်၊ မအီမသာဖြစ်အောင် ကြောက်လန့်၊ သဲထိတ်ရင်ဖို အဖြစ်သို့ ရောက်အောင် လုပ်ဆောင်လေ၏။
တခါတလေ ဤအခြေအနေနှစ်ခုအကြား ၄င်း၏ဘ၀တစ်ခုလုံးကို မြှုပ်နှံလိုက်ရသည်အထိ ကွာဝေးသွားလေသည်။ နောက်ဆုံး၎င်းအနေဖြင့် အခက်အခဲ၊ အကြပ်အတည်း၊ အပူအပင်များ၊ ကြောက်ရွံ့၊ ထိတ်လန့်မှုများ ကြောင့် မိမိကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံသည် အဖြစ်သို့ ရောက်သွားရလေသည်။
သို့သော်လည်း ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေ၊အချိန်အခါ၌ အခက်အခဲ၊ အကြပ်အတည်းများမှ လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုသည်မှာလွယ်ကူသည့် လုပ်ရပ်တော့ မဟုတ်ချေ။ အတိုင်းမဲ့အချစ်သမား၊ အချစ်ရူးနှင့် ၄င်းကဲ့သို့အခြားသူ၏ မိတ်ဆွေများကို ကိုယ်ချင်းစာသူများ အားလုံးသည် မိမိဘ၀၏ စာမျက်နှာ၌ အချစ်ဆိုသည့် မည်သည့် သင်ခန်းစာမျှ မှတ်တမ်းမရှိစေရန် အချစ်စာမျက်နှာ အားလုံးကို ဖျက်လိုက်ကြလေသည်။
ဤအတွက်ကြောင့် ၄င်းတို့အဖို့ မည်သည့် အသိဥာဏ်ဆိုင်ရာ အထောက်အထား သက်သေများ၊ LOGIC ဆိုင်ရာအထောက်အထား သက်သေများ အလုပ်မလုပ်ကြတော့ပေ။ဤနေရာ၌၄င်းတို့သည်အခြားသူများ အားလုံးနှင့်မတူတော့ဘဲ တစ်မျိုးတည်းထားလေတော့သည်။
ထို့ကြောင့် ၄င်းတို့၏ လောကနှင့် အခြားသူများ၏ လောကသည် အခြေခံအားဖြင့် အများနားလည် သဘောပေါက်သည့် စကားပင် နားမလည် သဘောမပေါက်တော့သည့် အထိ ကွာခြားသွားလေသည်။ ဤကဲ့သို့ဖြစ်နေ ခြင်းမှာ ၄င်းတို့သည် အချစ်၏ စကားကို သာ နားလည်ကြပြီး အခြားသူများမှာ ဦးနှောက်အသိဥာဏ်နှင့် LOGIC ၏စကားကို ပြောကြဆိုကြ နားထောင်ကြ သည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။
သို့သော်လည်းပဲ ဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများ (ဆွေမျိုးသွေးသားတော်စပ်သူများအနေဖြင့်) မိမိသူငယ်ချင်း(အချစ်ရူး)၏ အမှားအယွင်းနှင့် အပြစ်အနာကိုသိသူများသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာအရသော်လည်းကောင်း၊ အထူးသတိဂရုပြုခြင်း ဖြင့်တစ်နည်း၊ ၄င်းပါလာအောင်ကြိုးပမ်းသင့်လေသည်။ သွယ်ဝိုက်သည့်နည်း ဖြင့်ပြဿနာများကို ၄င်းအရှေ့တွင်ရှင်းပြရပေမည်။
၄င်းအနေဖြင့် မခံစားမရိပ်မိအောင်၊ ဒဏ်ရာဟောင်း ပိုပြီးနားကြည်းမှု မဖြစ်အောင် သတိပြုရပေမည်။ အချစ်ရူးမှု၏ အစစ်အမှန် အခြေအနေ၊ စောဒကတက် မှုများ နှင့် အမြင်မှားမှုများကို မေးခွန်းပုံစံလေးဖြင့် ရှင်းပြပေးရ မည်။ ဤအချစ်ရူးအနေဖြင့် မိမိ၏မှားယွင်းသည့်အချစ် (ကျော့ကွင်းတွင်မိနေ) ကြောင်း(အမှားကိုသိရှိလာပြီး) ထိုအမှားတွင်းမှ တဖြည်းဖြည်းဤမှားယွင်းမှု အမိုက်လမ်းလွဲလမ်းမှားမှ ပြန်ထွက်လာသည့် အလုပ်(မျိုး) လုပ်ပေးရပေမည်။
ပြီးနောက်၎င်းအနေဖြင့် မည်သူ၏အကူအညီ အထောက်အပံ့မပါပဲ၊ အမှန်တရားကို သိရှိနားလည်ပြီး မိမိသဘောဆန္ဒဖြင့် ထိုလမ်းလွဲလမ်းချော်မှ ပြန်လှည့်ရခြင်း (မည်သူမှ) ၄င်းကို လမ်းပြလိုက်သည် မဟုတ်ဟု ထင်အောင် ပြုပေးရမည်။
အချစ်ရှုံးသမား၊ မျက်ကန်းအချစ်သမား ဘ၀အဖြစ်သို့ မရောက် အောင် သာမာန်အခြေအနေ၌ပင် အန္တရာယ်မှ မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရန် မလွဲမသွေ လူငယ်လူရွယ်တိုင်းကြိုးပမ်း သင့်ပေသည်။ သတိပေးနေရပေမည်။
အကြောင်းမှာအချစ်ရူး၊မျက်ကန်းအချစ်ဘ၀သို့ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်း မနုဿလူသားဦးနှောက်အသိဥာဏ်တံခါးသည်ပိတ်သွားသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။အသိဥာဏ်နှင့် LOGIC အစွမ်းမပြနိုင်တော့ချေ ဖြစ်သွားလေသည်။
ဤအတွက်ကြောင့် ဤကဲ့သို့သော အချိန်အခါမျိုးတွင် ၄င်းအား ကူညီဖေးမပြီး ထိုဆိုးရွားမှုမှ လွတ်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရပေမည်။
လူငယ်လူရွယ်များ အနေဖြင့် မဖြစ်မနေ၊ မလွဲမသွေ မိမိကိုယ်ကို သတိပေး၊ အသိပေးနေရပေမည်။ အမြဲတမ်း (နားလည်သဘောပေါက်ပြီး သူများ၊ ပညာရှင်များ) (အာလင်မ်များ) ၏ ဆိုဆုံးမမှု၊ သြ၀ါဒများကို တန်ဖိုး ထားပြီး လိုက်နာရပေမည်။ ပြဿနာရင်ဆိုင်ရန် ၄င်းတို့ထံမှ စစ်ကူရယူရ ပေမည်။
အချစ်ရူးမျက်ကန်းအချစ်သမားများ သဘောတူလက်ခံလာစေရန် အလို့ငှာ …..
(ဤ) အချစ်ရူးများနှင့် အလွန်အမင်းစာနာစိတ်၊ ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ် ထားကြောင်း၊ ၄င်းတို့၏ချစ်သူများကို ချီးမွမ်းထောပနာပြုပေးခြင်း၊ ရွေးချယ် ရာ၌ တစ်ရာ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် မမှားခဲ့ကြောင်းတို့ဖြင့် မိမိဖက် အထူးဆွဲဆောင် နိုင်လေ၏။ သဘောတူလက်ခံယုံကြည်လာအောင် ပြုနိုင်လေသည်။
ဤအခြေအနေမျိုး၌ လူငယ်လူရွယ်များအနေဖြင့် ဆိုဆုံးမ၊သြ၀ါဒ ပေးသူများ၏အတွေးအခေါ်ကိုလေးစား(တန်ဖိုးထားမှု)နှင့်ဂရုပြုပြီး နားအ၀င်ခံ မှုတို့ကို ပြုလာကြပေလိမ့်မည်။
မဖြစ်မနေ ဂရုပြုသတိရှိရမည်မှာ …..
ဤကဲ့သို့သော အချစ်ရူး၊မျက်ကန်းအချစ်သမားများကို အထင်အမြင် သေးပြိး သိက္ခာချခြင်း၊ ချိုးနှိမ်ခြင်းဖြင့် မကောင်းသည့်အကျိုးဆိုး များကိုသာ ဖြစ်စေမည် ဖြစ်လေသည်။ ဤအတွက်ကြောင့် ဤကဲ့သို့သော လုပ်ရပ်မျိုးမှ အပြင်းအထန်ရှောင်ကျဉ် သင့်ပေသည်။
ထို့ပြင် အစကတည်းက လမ်းလွှဲ လမ်းမှားပြီး အန္တရာယ် နစ်နေသူ များကို ထပ်ပြီးပြစ်တင်ရှုံ့ချခြင်းနျင့် ချိုးနှိမ်ခြင်းဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ခံခြင်းသည် တရား မမျှတချေ။ တရားမျှတမှုနှင့် ဝေးသွားလေသည်။